Dr Randriamiarisoa Joseph : « natao hanabe voho ny antoko ny lalàm-pifidianana » | NewsMada
Dr Randriamiarisoa Joseph : « natao hanabe voho ny antoko ny lalàm-pifidianana »
« Natao hanabe voho ny antoko politika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Raha manana lalàna mifehy ny fifidianana tsara isika, tonga hatrany amin’ny hoe telo na efatra ny antoko politika misy eto amin’ny firenena. »
Izay ny fanehoan-kevitry ny minisitra teo aloha sady mpikamban’ny antoko UNDD, ny Dr Randriamiarisoa Joseph, momba ny volavolan-dalàm-pifidianana dinihina eny anivon’ny parlemanta amin’izao fotoana izao. Mbola tsy ho hita amin’ny lalàna mifehy ny fifidianana amin’izao izay fanabeazam-boho ny antoko politika izay.
Natao hahazoan’ny olona rehetra mandray anjara amin’ny fifidianana izany lalàna mifehy ny fifidianana izany. Mieritreritra aza ry zareo fa tokony ho adidy tsy maintsy ataon’ny mpifidy tsirairay avy ny fifidianana, satria izay no andraisan’ny olona rehetra anjara. Tsy mbola izay aloha ny zava-misy fa iainana.
Farany, tokony hahitana ny fangaraharana na ny fahamarinana amin’ny latsa-bato ny lalàna mifehy ny fifidianana. Tsy mbola hita taratra amin’ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana amin’izao koa izay.
« Ho anay, ny lalàna mifehy ny fifidianana ilain’ny firenena: miainga amin’ireo foto-kevitra telo goavana be ireo », hoy izy. Efa mba misy fihatsarana ihany ny volavolan-dalàna mifehy ny fifidianana amin’izao fotoana izao, fa tsy mbola amin’izay tadiavin’ny antoko UNDD.